विश्वकप:कुन खेल हेर्ने अलमलमा हुनुहुन्छ ? छुटाउनै नहुने समुह चरणका यी खेल - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विश्वकप:कुन खेल हेर्ने अलमलमा हुनुहुन्छ ? छुटाउनै नहुने समुह चरणका यी खेल
एजेन्सी । आगामी बिहिबार देखि सुरु हुने विश्वकप २०१८ को लागि सबै टोली रसिया आइसकेका छन् । १४ दिनमा ४८ खेल हुने समुह चरणको सबै खेल हेर्ने कमै दर्शक होलान् । तथापी आफुलाई मन पर्ने टोलीको कुनै खेल नछुटाउनेहरुको पनि संख्या प्रशस्तै हुन्छ ।
विश्वकप फुटबल ४ वर्षमा एक पटक आउने हुँदा हरेक खेलहरु ‘हाइलाइट्स’ मात्र भएपनि हेर्न मज्जा हुन्छ भने चर्को प्रतिस्पर्धा हुने यस्तो खेल प्रत्यक्ष हेर्नुनै अत्याधिक रोमाञ्चक हुन्छ । जुनसुकै टोलीको हारजित भएपनि यो विश्वकपमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल हेर्न पाउनु दर्शकको लागि एकमात्र उद्देश्य हुने हुँदा यो महाकुम्भमा फुटबल प्रेमीले प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरुको मज्जा लिन पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।